"Nipetraka teo amoron-dàlana Bartimeo jamba mpangataka... Niantso izy ka nanao hoe : Ry Jesosy... ô, mamindrà fo amiko!" Marka 10:46, 47
"(Hoy Jesosy taminy) Inona no tianao hataoko aminao? Ary hoy ilay jamba taminy : ... Ny mba hampahiratina ny masoko. Ary hoy Jesosy taminy: Mandehana ianao, ny finoanao no efa namonjy anao. Dia nahiratra niaraka tamin'izay ny masony, ka nanaraka an'i Jesosy teny an-dàlana izy." Marka 10:51, 52
Nipetraka teo amoron-dalana i Bartimeo jamba mpangataka. Izy dia mampahatsiahy antsika ireo izay miaina lavitry ny finoana, ka tsy afaka mahita ny fahamarinan'Andriamanitra. Ny fahajamban'izy ireo ara-panahy dia manaisotra ny tanjona sy fanantenana eo amin'ny fiainany : tsy mahita ny zava-dehibe izy ireo. Tahaka ity lehilahy ity, dia miandry vonjy avy amin'olona izy ireny. Kanefa dia nandalo teo Jesosy. Niangavy ny famonjeny i Bartimeo, tao anatin'ny fahoriany lalina: "Mamindrà fo amiko!" Na dia teo aza ny fivezivezen'ny olona, dia ren'i Jesosy ny fitarainany. Nantsoiny ilay jamba, ary ho setrin'ny finoany, dia nampahiratiny ny masony.
Anio dia mbola mihaino ny vavak'izay rehetra miantso Azy ny Tompo. Aza misalasala miresaka aminy. Te hampahiratra ny masontsika Izy, mba hahazoantsika, amin'ny alalan'ny finoana, mahafantatra ny fitiavany sy manaiky ilay famonjena lehibe azony tamin'ny nahafatesany ho antsika.
Tsy nisalasala i Bartimeo. Indro izy nanaraka an'i Jesosy teny an-dàlana. Nanomboka hatreo dia nanjary nisy dikany ny fiainany, nanana antom-piainana nahaliana sy tanjona ifaharana. Niova avokoa ny zavatra rehetra ho azy. Ho anao koa, hanova ny fiainanao manontolo ny fifanenanao amin'i Jesosy.
Nanirery teo amoron-dalana izy,
Ity lehilahy jamba nalahelo fo sy naratra ;
Nitoloko izy, nitambesaran'ny fisalasalana,
Nefa tonga Jesosy, nanao taminy hoe: "Sitràna!"
Tsy miova mandrakizay Ilay Zanak'Andriamanitra,
Mbola afaka manampy sy mamonjy ary manasitrana Izy!
Manatòna Azy àry, manatòna Ilay Mpamonjy tia anao,
Na iza ianao na iza, dia te hitahy anao Jesosy.